Daaweynta Oxygen Hyperbaric Therapy - Daaweynta HBOT - Daaweynta Hyperbaric
Daaweynta Oxygen Hyperbaric Therapy - HBOT Therapy - Therapy Hyperbaric
Home/Daaweynta Oxygen Hyperbaric Therapy - HBOT Therapy - Therapy Hyperbaric
Daaweynta Oxygen Hyperbaric Therapy - HBOT Therapy - Therapy Hyperbaricteknamfg2018-01-21T06:10:26+00:00
Daaweynta Oxygen Hyperbaric Therapy (HBOT)
Sayniska Daaweynta Daawooyinka Daawooyinka Dareeriga ah
Daaweynta Oxygen ee Hyperbaric, oo loo yaqaano sida HBOT, waa daweyn caafimaad oo bixisa 100% oxygen habka sambabada ee bukaan-socodka halka ay ku jiraan guddi cadaadis leh. Bukaanku wuxuu ku neefsanayaa oksijiin heerarka ka weyn kan 21% kaas oo laga helo jawiga caadiga ah ee badda.
Daaweynta Hyperbaric waxay ku saleysan tahay laba shuruuc oo aasaasiga ah ee fisikiska.
"Xeerka Henry"Waxay sheegaysaa in qadarka gaaska la kala diri karo dareeraha uu ku jiro cadaadiska gaasta ka sareysa dareeraha, haddii aysan jirin ficil kiimiko ah.
"Lawle Law"Wuxuu sheegayaa in heerkulka joogtada ah, mugga iyo cadaadiska gaasku ay yihiin kuwo gaaban.
Taas macnaheedu waa gaas ayaa isku dhejin doona saamiga cadaadiska ku habboon. Isticmaalka sharciyadan Oxygen Therapy waxay u oggolaaneysaa oksijiin badan in la geeyo unugyada iyo xubnaha.
Dhibaatooyinka kale waa mid aad u yar oo marar dhif ah ayaa soconaya. Daawada Hyperbaric maaha daawo loogu talagalay calaamadaha ugu badan, laakiin waxay muujisay in ay kordhiso awoodda difaaca, caawinta bukaanada qaba dhibaatooyinka ka yimaada dhaawacyada joogtada ah ee naafanimada adag iyo naafaynta naafada.
Taariikhda Tallaalka Oktoobar
Daaweyntaan daaweyneed ee dib loogu soo celin karo 1600.
In 1662, ugu horreeyey Chamber of Hyperbaric waxaa la dhisay oo ay maamusho wadaad British ah oo lagu magacaabo Henshaw. Wuxuu dhisey qaab dhisme oo cinwaankiisu yahay, Domicilium, oo loo isticmaalay in lagu daaweeyo xaalado kala duwan.
1878, Paul Bert, oo ah cilmi-nafsiga Faransiiska, wuxuu helay xiriirka u dhexeeya xanuunada isdabajoogga iyo xayawaanka nitrogen ee jirka. Bert kaddib wuxuu ogaadey in xanuunka laga yareeyn karo dib-u-kicinta.
Fikradda daaweynta bukaannada ku hoos jira xaaladaha cadaadiska waxaa sii waday dhakhtar Faransiis ah oo la yiraahdo Fontaine, oo markii dambe dhistay qolal farsameysan ee wareega mobilka ee 1879. Fontaine wuxuu ogaaday in oksaydhka yar ee la yiraahdo 'nitrous oxide' uu awood u leeyahay cadaadis dheeraad ah, marka laga reebo bukaannadiisa oo yeesha oksijiin.
Hore ee Dr. 1900's Dr. Orville Cunningham, oo ah professor suuxdin, ayaa arkay in dadka qaba cudurrada wadnaha ee gaarka ah ay soo fiicnaanayaan marka ay ku noolaanayaan xeebta meel u dhow heerarka sare.
Waxa uu la dhaqmay saaxiib la ahaa oo ka cabanayey hargab wuxuuna ku dhowaaday geerida sababta oo ah xannibaadda sambabada. Guulihiisii ​​dib u soo noqdey wuxuu u horseeday inuu horumariyo waxa loo yaqaan "Isbitaalka Boostada" oo ku yaal xeebta Lake Erie. Qaab dhismeedka lixda sheeko ayaa lagu dhisay 1928 waxaana uu ahaa cagaha 64 dhexroor. Isbitaalku wuxuu gaari karaa 3 atmospheres oo buuxa (44.1 PSI). Nasiib darro, sababtoo ah xaaladda dhaqaale ee niyadjabsan ee dhaqaalaha, waxaa la xaddiday intii lagu jiray 1942 ee loogu talagalay.
Chambers Hyperbaric waxaa mar dambe soo saaray milatariga 1940 si loo daaweeyo noocyo badan oo badda badda ah kuwaas oo ay ka soo gaareen jiritaanka hufnaanta.
1950, dhakhaatiirta ayaa markii ugu horreysay u shaqeynayay Daaweynta Hyperbaric inta lagu jiro qalitaanka wadnaha iyo sambabada, taas oo keentay isticmaalka sumowga carbon monoxide ee 1960. Tan iyo markaas, in ka badan tijaabooyinka 10,000 iyo baaritaanada kiisaska ayaa loo dhammeystirey codsiyo badan oo kale oo la xiriira caafimaadka iyada oo inta badan natiijooyinka ka soo baxa wargelinta guusha.
UHMS ayaa qeexaysa Daaweynta Oxygen ee Hyperbaric (HBOT) Sida faragelinta kaas oo shaqsi ahaan neefsanayo dhow 100% oxygen kolba halka qol hyperbaric la cadaadiyay in ka badan cadaadiska heerka badda (jawiga 1 buuxda, ama ALMAATA) weyn gudaha.
Ujeedada daaweynta, cadaadisku waa inuu le'eka yahay ama ka sarreysaa 1.4 ATA halka neefsashada u dhaw 100% oxygen.
The United States Pharmacopoeia (USP) iyo Tifaftirayaasha Gas Association (CGA) Shahaado A sheeg oxygen fasalka caafimaad u noqon aan ka yarayn 99.0% by mugga, iyo Ururka Ka Hortagga Dabka Qaranka qeexan USP oxygen fasalka caafimaad.
Xaalado gaar ah waxay u taagan tahay habka daaweynta asaasiga ah halka kuwa kale ay tahay mid ku haboon waxqabadyada qalliinka ama daaweynta.
Daaweynta waxaa lagu samayn karaa labadaba Monoplace Hyperbaric Oxygen Therapy Chamber ama Multiplace Hyperbaric Oxygen Therapy Chamber.
Monoplace Hyperbaric Chambers ee Oxygen Therapy waxay qabataa bukaanka keliya; qolka oo dhan waxaa lagu riixaa meel u dhow 100% oxygen, bukaan-socodka wuxuu si toos ah u neefsanayaa qolka qulqulka qulqulka.
Multiple Hyperbaric Chambers ee Oxygen Therapy haysato laba qof ama in ka badan (bukaanka, kormeerayaasha, iyo / ama shaqaalaha kaalmada).
Qeybaha Multipace waxaa lagu cadaadiyaa hawo cadaadis leh halka bukaannada ay u neefsadaan 100% oxygen iyada oo loo marayo maskooyinka, daboolka madaxa, ama tuubooyinka endotracheal.
Marka la eego qeexidda UMMMS iyo go'aaminta Xarumaha Adeegyada Medicare iyo Adeegyada Medicaid (CMS) iyo kuwa kale ee sadexaad ee daroogada, neefsashada darajada caafimaadka 100% oxygen at jawiga 1 ee cadaadiska ama soo saarista qaybo ka mid ah jirka ee 100% oxygen ma aha Daaweynta Oxygen Hyperbaric.
Bukaanka Hyperbaric waa in uu helo oksijiin by neefsan gudaha guddi cadaadis leh. Xogta hadda jirta waxay muujinaysaa in cadaadisku uu noqon doono 1.4 ATA ama ka sareeya.
Waxaa hadda jira 14 calaamadaha la ogolaaday ee USA.
Air ama Gas Embolism
Kaarboon Monoxide ku sumo
Myositis iyo Myonecrosis (Gas Gangrene)
Dhaawaca Dhaawaca, Qaybta Is-barbardhigga iyo Iskudeyaalka kale ee Ba'an ee daran
Dhiig-xun (Low Anemia)
Infakshannada Cudurka Necrotizing
Dhaawic shucaac ah oo gaabis ah (Neef Joonis iyo Bony Necrosis)
Nafaqooyinka iyo daboolida
Dhaawac Dab Dhab Xanuun leh
Dhibaatada Maqalka Maqal-Xanuunka Dheef-shiid kiimikaadka ah
Maxay tahay qolka Hyperbaric?
Oksijeerka maaddada ah, ama Topox, waxaa loo maamulaa iyada oo loo marayo qol yar oo la dhigo meel xagal ah oo lagu riixo oksijiinka. Bukaanku ma neefsanayo oksijiinka, mana aha inta kale ee jirka lagu cadaadiyo. Sidaa daraadeed, bukaanku waxtar uma leh badi saameynta wanaagsan ee Daawada Hyperbaric, taas oo ah nidaam ama ka dhacaya heer qoto dheer oo ka baxsan ogsijiinka jirka la marin karo (fiiri qeybta Fudud ee Fududaanta iyo Fiyuusiga ee hoose). Topox wuxuu ku salaysan yahay fikradda ah in oksijiin uu ku faafo unugyada qoto dheer oo ah micnaha 30-50.  Habkani ma daaweynayo DCS, emboliinka gaaska dabiiciga ah (AGE), ama sunta carbon monoxide (CO).
Iyada oo naqshadda Topox ah waa in la kala saaro cadaadiska inta u dhexeysa mashiinka iyo jawiga furan si aad u cadaadiso mashiinka. Si looga fogaado xagjirnimada in laga riixo mishiinka cadaadiska ah, kabaha sanduuqa waa inuu si adag ugu xiran yahay dhinaca cirifka, taas oo abuuraysa bandhiga waxtarka leh. Topox ma daboolayo caymis, mana ay taageereen joornaalka Diabetes Care si loogu daaweeyo boogaha cagaha.
Nooca kale ee aqalka waxaa ah qolka la yiraahdo "Hyperbaric Chamber". Mashiinnada jilicsan ayaa lagu riixi karaa 1.2-1.5 Aasaasiyadeed (ATA). Waxa kaliya oo ay ansaxiyeen FDA-da si loogu daaweeyo cudurka kor u qaadista. Badankooda Badmareenka Sarreeya ee Sareeya ayaa si khaldan loogu iibiyaa "Qolal khafiif ah" oo loogu talagalay calaamadaha aan la aqoonsan.
Physics iyo Physiology daawada hyperbaric
Fisikada ka dambeysa Qalabka Oksijeer ee Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) ayaa ku dhex jira shuruucda gaaska ee ku habboon.
Codsiga Sharciga Boyle (p1 v1 = p2 v2) ayaa lagu arkay dhinacyo badan oo ah Daawada Hyperbaric. Tani waxay faa'iido u yeelan kartaa astaamaha embolic sida xanuunka kor u kaca (DCS) ama galmada guntiga (AGE). Maadaama cadaadiska uu kordhay, mugga qajiyadaha khuseeya ayaa hoos u dhacaya. Tani waxay sidoo kale muhiim u noqoneysaa xakamaynta qolka; haddii bukaanku hayo neefsashadiisa, mugga gaasku ku xannibmeen sanbabada oo ku fidda oo laga yaabo inuu keeno pneumothorax.
sharciga Charles ([p1 v1] / T1 = [p2 v2] / T2) sharxayaa kordhay heerkulka markii markabka la cadaadiyay iyo hoos u dhac ah ee heerkulka la depressurization. Tani waa muhiim in la xusuusto marka la daaweynayo carruurta ama bukaanada aad u jirran ama la qoondeeyey.
Sharciga Henry wuxuu dhigayaa in qadarka gaaska lagu kala diro dareeraha waxa uu u dhigmaa cadaadiska qaybta gaasta ee dusha sare ee dareeraha. Adiga oo kordhinaya cadaadiska atmospheric ee qolka, oksijiin badan ayaa lagu kala diri karaa plasma inta lagu arki lahaa cadaadiska sare.
Dhakhtarku waa inuu awoodaa inuu xisaabiyo inta ay leegtahay oksijiinta bukaanka qaata. Si loo qiyaaso qadarkan, atmospheres muto (ATA) ayaa loo isticmaalaa. Tan waxaa lagu xisaabin karaa boqolleyda ogsijiinta ee isku dhafka gaas (badiyaa 100% ee Oxygen Therapy; 21% haddii loo isticmaalo hawo) oo lagu badiyo cadaadiska. Cadaadiska waxaa lagu muujiyaa cagaha badda, taas oo ah cadaadis la soo martay haddii mid ka mid ah uu ku soo degayo qoto-dheer marka uu ku jiro badda. Qoto dheer iyo cadaadis ayaa lagu qiyaasi karaa siyaabo badan. Isbedelada caadiga ah waa 1 jawi = XAGGA DHEXE ee badmaaxa = Miisaanka 33 ee baddaha biyaha = XERUMX pounds per square square (psi) = Bar 10.
Qalabaynta Oxygen Therapy (HBOT) Terminology
Daaweynta oksijiin-dareenka ah ee Hyperbaric wuxuu qeexayaa qofka uu neefsanayo 100 boqolkiiba oksijiinta cadaadiska ka sarreeya heerka badda si qaddar go'an loo qaato-badanaa 60 ilaa daqiiqo 90.
Cadaadiska Atmospheric - hawada aan neefsanayno waxay ka sameysan tahay 20.9 boqolkiiba oksajiinta, 79 nitrogen boqolkiiba, iyo 0.1 boqolkiiba aaska gaaska. Cadaadiska caadiga ah ayaa cadaadiya maxaa yeelay waxay leedahay miisaan iyo miisaankani waa la jiidayaa xarunta dhexe ee culayska. Cadaadiska la soo bandhigay waxaa lagu muujiyey cadaadiska atmospheric. Cadaadiska atmospheric ee heerka badda waa 14.7 pounds per square square (psi).
Cadaadiska Hydrostatic - Marka aad kor u kacdo heerka badda, cadaadiska cimilada ayaa hoos u dhacaya sababta oo ah qiyaasta hawada ka sarreysa adigu miisaankeedu yar yahay. Haddii aad ka hooseyso heerka hoose ee badda, taa soo horjeeda ayaa dhacda (cadaadiska ayaa kordha) sababtoo ah biyaha ayaa leh culeys ka weyn hawada. Sidaa daraadeed, qoto dheer ayaa hoos u dhacaya biyaha markaa cadaadiska weyn. Cadaadiskaan waxaa loo yaqaan cadaadiska hydrostatic.
Atmospheres Absolute (ATA) - ATA waxaa loola jeedaa cadaadiska ciriiriga ah ee runta ah iyada oo aan loo eegin goobta. Habkani, qoto-dheeraadka ayaa la gaari karaa haddii kor ku yaal ama ka hooseeyo heerka badda.
Waxaa jira shuruudo kala duwan oo lagu cabbiro cadaadiska. Daaweynta HBO waxay isticmaashaa cadaadis ka badan tan ka jirta dhulka dusha sare ee badda, oo lagu magacaabo cadaadiska hyperbaric. Shuruudaha ama unugyo loo isticmaalaa in lagu muujiyo cadaadis hyperbaric ka mid ah milimitir ama inches of mercury (mmHg, inHg), pounds halkii inch square (psi), cagaha ama mitir oo biyo ah badda (fsw, MSW), iyo atmospheres buuxda (ALMAATA).
Mid ka mid ah jawiga qeexan, ama 1 ATA, waa cadaadiska celceliska atmospheric ah ee lagu sameeyey heerka badda, ama 14.7 psi. Labo jawi oo qumman, ama 2 ATA, waa laba jeer cadaadiska atmospheric ah ee lagu sameeyey heerka badda. Haddii dhakhtarku qoro hal saac oo daaweynta HBOT ee 2 ATA, bukaanku wuxuu neefsanayaa 100 boqolkiiba hal saac inta lagu jiro laba jeer cadaadiska atmospheric ee heerka badda.
Su'aalaha qotada dheeraadka ah : Baaritaanada Hyperbaric : Macluumaadka Fudud